Russia Polisifo Abɔ Awura Yehowa Adansefo Nwɔtwe Afie Mu Akɔhwehwɛ Hɔ Wɔ Crimea | JW.ORG News
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Armenian Azerbaijani Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Korean Sign Language Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Yoruba
Russia Polisifo Abɔ Awura Yehowa Adansefo Nwɔtwe Afie Mu Akɔhwehwɛ Hɔ Wɔ Crimea
Fida, November 16, 2018 anwummere no, polisifo bɛyɛ 200 a wofi Russia Federal Security Service (FSB) bɔ wuraa Yehowa Adansefo nwɔtwe afie mu wɔ Crimea kɔhwehwɛɛ hɔ.
Ná FSB polisifo no de ade akatakata wɔn anim kurakura tuo. Enti bere a wɔbɔ wuraa anuanom afie mu no, ɛmaa ehu tɔɔ wɔn so. Ɛno nti anuanom mmienu koma bɔɔ periperi ma wɔde wɔn kɔɔ ayaresabea. Ɛmaa yɛn nuabea baako a wanyinsɛn pɔnee. Wei yɛ awerɛhosɛm.
Onua Aleksandr Ursu a wadi mfe 78 de, polisifo no teetee no pa ara. Wopia no fam ban ho, wɔma ɔdaa fam, na wɔde abankaba guu ne nsa. Afei nso, polisifo no bisabisaa anuanom pii nsɛm.
Saa bere yi de, Onua Sergey Filatov (nifa so) nko ara ne obi a wɔabɔ no sobo sɛ ɔyɛ nsɛmmɔnedifo. Mmara a wɔde bu Russia man, nea ɛtɔ so 282.2 fã a edi kan a ɛfa nsɛmmɔnedi ho no, ɛno na atumfoɔ no agyina so abɔ no sobo. Russia aban no ahyɛ sɛ wɔn a wɔwɔ Crimea no mfa saa mmara koro yi ara nyɛ adwuma. Onua Sergey Filatov adi mfe 47 na ɔwɔ mma nnan. Ɔno ne Yehowa Danseni a odi kan a wɔabɔ no sobo sɛ otutu ɔman ase wɔ Crimea.
Ɔtaa a anuanom refa mu ne sɛnea polisifo bɔ wurawura wɔn afie mu kɔhwehwɛ hɔ no haw yɛn nanso yɛwɔ ahotoso pa ara sɛ Yehowa, yɛn Nyankopɔn bɛhyɛ yɛn den na yɛatumi agyina ɔhaw a ahyɛ wiase yi mu ma no ano.—Yesaia 41:10.
Wɔkɔ So Kyekye Yehowa Adansefo a Wɔwɔ Russia De Wɔn Gu Afiase